Hotel Booking and Ticket Reservation Staff | Job in Myanmar ﻿
Hotel Booking and Ticket Reservation Staff F (1)
12.8.2020, အချိန်ပြည့် , Tourism / Travel
ကုမ္ပဏီ: Sea Rain Co.,Ltd
. Good communication skill.
. Good interpersonal skill.
. Any graduated.
. 1 year experience in related field. Can apply fresher.
. Good computer skill.
. Must be familiar with Internet & Email.
ကျွန်တော်တို.ကမ်းလှမ်းသည် Female (1) Post
အလုပ်တည်နေရာ No.768, Room A3, Yadanar Road, Thingankyun Township, Yangon
Job details အလုပ်အမျိုးအစား: Hospitality & Tourism jobs
Company Industry: Tourism / Travel
4 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Tourism / Travel
•	ရုံးတွင်းကိစ္စများကိုတာဝန်ယူလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Adminပိုင်းဆိုင်ရာများတာဝန်ယူလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Meeting Minuteများမှတ်ရမည်။ •	MD ကို Remindလုပ်ပေးရမည်။
အမျိုးအစားအလိုက် အလုပ်ကြော်ငြာများ Secretarial Jobs
အမျိုးအစားအလိုက် အလုပ်ကြော်ငြာများ Secretarial Jobs နှင့် နေရာဒေသရှိ Yangon (Rangoon)
692 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Tourism / Travel
. Good communication skill. . Good interpersonal skill.
အမျိုးအစားအလိုက် အလုပ်ကြော်ငြာများ Hospitality & Tourism jobs
အမျိုးအစားအလိုက် အလုပ်ကြော်ငြာများ Hospitality & Tourism jobs နှင့် နေရာဒေသရှိ Yangon Region
806 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Tourism / Travel
•	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
Sales & Marketing M/F (.)
•	သွက်လတ်တက်ကြွ၍ အဖွဲ့ အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်လိုသူဖြစ်ရမည်။ •	ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားသူ ဦးစားပေးမည်။ •	ရေရှည်လုပ်ကိုင်လိုသူဖြစ်ရမည်။
အမျိုးအစားအလိုက် အလုပ်ကြော်ငြာများ Sales & Marketing Jobs နှင့် နေရာဒေသရှိ Yangon Region
•	ရုပ်ရည်ချေားမောပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
အမျိုးအစားအလိုက် အလုပ်ကြော်ငြာများ IT & Telecoms jobs နှင့် နေရာဒေသရှိ Yangon (Rangoon)
•	ရုပ်ရည်ပြေပြစ်ကာ အများနှင့်ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ •	တာမွေမြို့နယ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။
Hotel Booking and Ticket Reservation Staff Hospitality & Tourism jobs jobless jobsinyangon.com Sea Rain Co.,Ltd. Hospitality & Tourism jobs Hospitality & Tourism jobs Tourism / Travel မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်များ၊ ရန်ကုန်ရှိအလုပ်များ
Search best job in Salin at www.jobless.com.mm. - Exclusive job portal in Myanmar. Apply online today!
Merchandising Manager M/F (1)
York Overseas Limited
Hospitality jobs in Myanmar
Sales Staff (Fashion) (Code-41879)
Corporate Branding Manager (Expatriate)
Customer Care (Global Net) - Mandalay
Marketing Planning Manager, Brand Marketing Department
Yangon (Rangoon) 64 နေ့များ
Mandalay City 109 နေ့များ
Mandalay Region 273 နေ့များ
Yangon (Rangoon) 315 နေ့များ
Secondary Teacher (KS3 And KS4)
Yangon Region 337 နေ့များ
Sales Executive (Mandalay)
Mandalay Region 509 နေ့များ
Yangon (Rangoon) 533 နေ့များ
Mandalay Region 541 နေ့များ
Area Sale Manager (Mandalay)
Mandalay Region 592 နေ့များ
Yangon (Rangoon) 594 နေ့များ
Yangon (Rangoon) 598 နေ့များ
Yangon (Rangoon) 608 နေ့များ
Mandalay Region 615 နေ့များ
Yangon Region 622 နေ့များ